मर्यादाको मूल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
विदेशीसँग व्यवहार गर्दा मर्यादाको अधिक ख्याल गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञमध्येमा पर्छन्, जंगबहादुर राणा । भारतीय रजौटाका दिवानसरह नभई सार्वभौमसत्तासम्पन्न राजाका दूतको हैसियतले आफूलाई १९ तोपको सलामी, बेलायती महारानीसँग शिष्टाचार भेट र प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक छलफलको अवसर दिन बेलायती प्रशासकहरुलाई राजी गराएपछि मात्रै उनी युरोपतिर लागेका थिए ।
असार २७, २०७७ सुजित मैनाली
‘मत्स्य न्याय’ को सिद्धान्तअनुसार, मर्यादाको स्रोत सामथ्र्य हो । सामथ्र्यको प्रधान्यलाई अनुमोदन गर्ने यो यथार्थवादी दृष्टिकोण हो । यस दृष्टिकोणबारे अझ राम्रोसँग बुझाउन महाभारतको एउटा प्रसंगले मद्दत गर्छ । चीरहरणका बखत द्रौपदीले सभामा उपस्थित बुज्रुकहरूसँग धर्म के हो भनी प्रश्न गर्छिन् । जवाफमा भीष्मले भन्छन् (सभापर्व, १५।६९), ‘संसारमा बलवान मानिसले जेलाई धर्म बताउँछन्, अन्य मानिसले त्यसैलाई धर्म मान्छन् । कमजोर व्यक्तिले बताएको धर्म बलियो व्यक्तिको धर्ममुनि दबिन्छ ।’ धर्मको यस्तो परिभाषा गरेर भीष्मले आफूलाई परोक्ष रूपमा द्रौपदीविरोधी खेमामा उभ्याएका हुन्छन् । त्यतिबेला कौरवहरूसँग सत्ता र शक्ति दुवै भएकाले द्रौपदीसहित पाण्डवहरूको मर्यादा कौरवहरूको चाहनामा निर्भर छ भन्ने मत भीष्मको हुन्छ ।
शक्तिबाट नि:सृत मर्यादाबारे बुझाउन चीन–बेलायत सम्बन्धको एउटा घटना सहायक सिद्ध हुन सक्छ । अफिम युद्धअघि चीन आफूलाई संसारकै शक्तिशाली मुलुक ठान्थ्यो । कागज, छापा मेसिन, गनपाउडरदेखि संसारकै ठूलो पानीजहाज निर्माण गर्ने अग्रणी मुलुक हुनुको दम्भ चीनसँग थियो । मर्यादालाई लिएर बेलायतसँग एकपटक चीनको रस्साकस्सी पर्‍यो । बेलायतले त्यतिबेला आफूभन्दा कैयौं गुणा ठूला राज्यहरूलाई अधीन गरिसकेको हुनाले उसको तुजुक पनि सानो थिएन । अठारौं शताब्दीको अन्त्यताका मर्यादालाई लिएर यी दुई देशबीच भएको रस्साकस्सीको विवरण अत्यन्तै रोचक छ ।
त्यतिबेला चिनियाँहरू आफ्ना सम्राट्लाई ‘सेलेस्टियल एम्पेरर’ अर्थात् सम्पूर्ण चराचर जगत्माथि आधिपत्य भएका ‘देव सम्राट्’ मान्थे । त्यतिन्जेल चीन विदेशी शक्तिसँग पराजित भएको थिएन । त्यसैले बाँकी मुलुकहरू चीनलाई सलामी तिरेर आश्रित राज्य बन्न मात्र योग्य छन् भन्ने बुझाइ चिनियाँहरूको थियो । चीनले त्यतिबेला विदेशी व्यापारीहरूका लागि ग्वान्झाउको समुद्री नाका मात्र खोलेको थियो । समग्र एसियामा व्यापार बढाउन लालायित बेलायतले थप समुद्री नाका खुला गरिदिन र बेइजिङमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई स्थायी रूपमै बस्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै आएको थियो । चीनले मानिरहेको थिएन । त्यसैले सोझै चिनियाँ सम्राट्सँग भेटेर आफ्ना प्रस्तावहरूप्रति उनलाई सहमत गराउने सोचमा बेलायतीहरू थिए । तर, चिनियाँ अधिकारीले बेलायती प्रतिनिधिलाई आफ्ना सम्राट्सँग भेट गराउन चाहिरहेका थिएनन् । आलटाल गर्ने, मिति पञ्छाउने गर्दै आएका थिए ।
लामो प्रयत्नपछि बेलायतीहरूले सम्राट्सँग ‘दर्शनभेट’ को समय पाए । करिब सात सय प्रतिनिधिसहितको इस्ट इन्डिया कम्पनीको टोली सन् १७९२ को सेप्टेम्बरमा समुद्री मार्ग हुँदै ग्वान्झाउतिर हिँड्यो । सम्राट्लाई प्रभावमा लिन भनेर बेलायती राजाले दूरविन, एयरगन, घडीलगायत विज्ञान–प्रविधिका क्षेत्रमा बेलायतले हासिल गरेका उपलब्धि झल्काउने सामग्री सौगातबापत पठाएका थिए । त्यस प्रतिनिधिमण्डलका नाइके थिए, जर्ज म्याकार्टनी ।
ग्वानझाउ ओर्लिएर बेइजिङ पुगी सम्राट्सँग भेट गर्न उनीहरूलाई एक वर्ष लाग्यो । सम्राट्सँग भेट हुनुभन्दा करिब ६ साताअघिदेखि बेलायती टोलीलाई सम्राट्का अगाडि मर्यादित रूपमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिन थालियो । म्याकार्टनीलाई दुवै घुँडा टेकी टाउकाले तीनपटक भुइँ छोएर सम्राट्प्रति सम्मान दर्साउन भनियो । त्यस्तो गर्न म्याकार्टनीको मर्यादाले दिएन । टोपी फुकालेर एउटा घुँडा टेकी सम्राट्को हात चुम्न आफू तयार रहेको उनले बताए । तर, कुनै पनि हालतमा दुवै घुँडा नटेक्ने अडान लिए । चिनियाँहरूले मानेनन् । यदि चिनियाँहरूले भनेबमोजिम आफूले गर्नैपर्ने भए आफूसरहका चिनियाँ राजप्रतिनिधिले पनि बेलायती राजा जर्ज तृतीयको तस्बिरसामु त्यसैगरी सम्मान दर्साउनुपर्ने सर्त उनले राखे । त्यस घटनाबारे बेलायती लेखक मार्टिन ज्याक्सले ‘ह्वेन चाइना रुल्स द वर्ल्ड’ मा लेखेका छन्, ‘चिनियाँहरू यसमा सहमत हुने कुरै थिएन किनकि चिनियाँ सम्राट् ‘सम्पूर्ण चराचर जगत्का अधिपति’ थिए, उनले फगत एउटा देशका राजालाई आफूसरहको मान्ने प्रश्नै थिएन ।’
मार्टिनले सम्राट्सँगको भेटमा म्याकार्टनीले कसरी शिष्टाचार दर्साएका थिए भन्नेबारे उल्लेख गरेका छैनन् । यसबारे तत्कालीन विवरणले भन्छ, ‘आफ्ना राजालाई जसरी सम्मान दर्साउने चलन बेलायतमा छ, त्यसरी नै चिनियाँ सम्राट्लाई आफूले सम्मान दर्साउने अडानबाट म्याकार्टनी टसमस भएनन् । अर्थात्, टोपी फुकालेर एउटा घुँडा टेकी सम्राट्को हात चुम्न उनी राजी भए । उनलाई गलाउन नसकेपछि ‘टाँढाको यी बर्बरहरूले चिनियाँ संस्कार के बुझुन् !’ भनेर चिनियाँहरूले उनकै प्रस्ताव अन्तत: स्विकारे । शिष्टाचारका क्रममा हात चुम्ने प्रसंगचाहिँ झिकिदिए ।’
रोचक कुरा के छ भने म्याकार्टनी बेइजिङमै छँदा नेपाल र चीन युद्धरत थिए । यी दुईबीच मध्यस्थता गर्ने बहानामा दुवै पक्षसँग आफ्नो हित हुनेगरी सम्बन्ध बढाउने ताकमा इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो । कम्पनी सरकारको मध्यस्थतामा तिब्बतलाई लिएर नेपालसँग चीनको सन्धि गराउने प्रयोजनमा आवश्यक परेछ भने बेइजिङमै रहेका म्याकार्टनीलाई परिचालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि बनेर त्यतिबेला काठमाडौं आएका कर्णेल कर्कप्याट्रिकले गभर्नर जनरलका लागि तयार पारेको तत्कालीन लिखतमा उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्ना राजालाई एउटा घुँडा टेकेर सम्मान दर्साउने बेलायतीहरूलाई नेपालका भारदारले यहाँका राजासँग उभिएरै देखभेट गर्ने गरेको दृश्यले विस्मित तुल्याउने गथ्र्यो । जंगबहादुर बेलायतबाट फर्किएपछि श्रीलंकाबाट उनीसँगै काठमाडौं आएका बेलायती प्रशासक लरेन्स ओलिफेन्टले आफ्नो किताब‘अ जर्नी टु काठमान्डु’ मा यसबारे उल्लेख गरेका छन् । बेलायतबाट फर्किएपछि राजा सुरेन्द्रविक्रमसँग भेट हुँदा जंगबहादुरले दुवै हात बाँधी घुँडा नटेकीकनै कुरा गरेको प्रसंगबारे उल्लेख गर्दै ओलिफेन्टले यसबाट जंगबहादुर नेपालका सर्वेसर्वा हुने भन्ने कुरा सिद्ध भएको लेखेका छन् । ओलिफेन्टको विवरण पढ्दै गर्दा बेलायतीले झैं आफ्ना राजालाई घुँडा टेकेर सम्मान दर्साउने चलन नेपालमा थिएन भन्ने हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ।
चिनियाँ सम्राट्सामु चाहिँ नेपाली भारदारहरू दुवै घुँडा टेकेर प्रस्तुत हुने गर्थे । नेपाल–चीन युद्ध अन्त्य गर्नेगरी सन् १७९२ मा भएको सन्धिमा नेपालका राजाले हरेक पाँच वर्षमा चिनियाँ सम्राट्लाई सौगात पठाउनुपर्ने प्रावधान पनि थियो । सौगात पुर्‍याउन जाने नेपाली टोलीप्रमुखले चिनियाँ सम्राट्को अगाडि दुवै घुँडा टेकेर उभिनुपर्थ्यो ।
‘संस्थागत स्मृति’ राख्ने परम्परा हामीकहाँ निकै कमजोर रहेकाले बेइजिङ जाने नेपाली टोलीको अनुभव बताउने अत्यन्तै थारै सामग्री हामीसँग उपलब्ध छन् । औपनिवेशिक कालताका नेपालबारे कलम चलाएका अंग्रेज अधिकारीहरूले बरु शोधखोज गरेर त्यसबारे केही प्रकाश पारेका छन्, जसबाट हामीलाई बेइजिङ नियाल्ने आँखीझ्याल उपलब्ध भएको छ ।
बेलायतीहरूले संकलन गरेको विवरणअनुसार, नेपाली टोलीलाई चीन पुगेर फर्किन १८ महिना लाग्थ्यो । बेइजिङमा उनीहरू ४५ दिन रहन्थे । चिनियाँ सम्राट्को अगाडि परेपछि टोलीप्रमुखले दुवै घुँडा टेकी टाउकाले तीनपटक भुइँ छुनुपथ्र्यो । दुवै घुँटा टेकेरै सम्राट्सँग आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो । चिनियाँ सम्राट्को अगाडि कसैले पनि उभिन नपाउने भएकाले सम्राट्सँग भेट गर्न जाने जोकोहीले त्यतिबेला घुँडा टेक्न सजिलो होस् भनेर काखीमा सानो गलैँचा च्याप्ने गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अनुभवबारे शोधखोज गरी लेख्ने बेलायती सैन्य अधिकारी अर्फर क्याभिनाघले उल्लेख गरेका छन् । यदि बेलायतको शक्ति नेपालको जस्तै हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय मर्यादालाई लिएर चिनियाँहरूसँग बेइजिङमै अडान लिने हुती के म्याकार्टनीसँग हुने थियो ?
सबै सन्दर्भमा मर्यादा सामर्थ्यबाट नि:सृतचाहिँ हुँदैन । सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको ओजले राज्यको मर्यादा निर्धारण गरिदिएका प्रसंग इतिहासमा अनेक छन् । जिम्मेवार ओहोदाको मानिसले यदि आफ्नो मर्यादाको पर्वाह गर्दैन भने उसको देशप्रति विदेशीले गर्ने व्यवहार पनि तदनुरूपकै हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा रणबहादुर शाहबारे उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । छोरा गीर्वाणलाई राजा बनाएर संन्यास धारण गरेका उनले आफ्नी प्रिय रानी कान्तवतीको मृत्यु भएपछि पुन: शासनसत्तामा फर्किन खोजे । आफू राजा भएको छनक दिनेगरी राजकाजमा सक्रिय भए । वैधानिक राजा छँदाछँदै रणबहादुरले सञ्चालन गर्न खोजेको समानान्तर सत्तालाई भारदारहरूले अनुमोदन नगरेपछि अप्ठेरोमा परिने डरले उनी काशीतिर भागे ।
कामुकतालाई लिएर रणबहादुर कुख्यात थिए । गाईगोरुको रतिक्रीडा नियाल्ने उनको अचम्मको सोख थियो । काशीमा छँदा संन्यासी अथवा पूर्वराजा दुवैलाई शोभा नदिनेगरी उनी अनेक स्त्रीसँग लहसिन थाले । संन्यास धारण गरेका राजपरिवारका सदस्यले दैहिक मोह नत्याग्नु त्यतिबेला असामान्य थिएन । परन्तु दैहिक आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा उनले राजोचित मर्यादा बिर्सिए । उनलाई काशीमा रहन–बस्न चाहिने जति रकम काठमाडौं दरबारले पठाउँथ्यो । अत्यन्तै खर्चालु स्वभावका उनी थप पैसा मागेर भारदारहरूलाई हैरान बनाउँथे । काठमाडौंबाट आएको पैसाले नपुगेपछि काशीका महाजन, इस्ट इन्डिया कम्पनी आदिसँग ऋण लिएर उनले दैहिक आवश्यकता पूरा गर्न थाले । यही मेसोमा जेठी रानी राजराजेश्वरीको गरगहनासम्म बेचिदिए ।
रणबहादुर फितलो स्वभावका छन् भन्ने थाहा पाएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले उनको भरपूर उपयोग गर्‍यो । उनलाई मागेजति ऋण दियो । उनलाई मोहरा बनाएर काठमाडौंमाथि दबाब सिर्जना गर्न भनेर क्याप्टेन नक्सलाई उनको सुखसुबिस्ताको ख्याल गर्ने बहानामा खटायो । रणबहादुरले पनि हौसिँदै आफूलाई नेपालको सत्तामा पुन:स्थापित गर्न सघाए पहाड र तराईमा उठ्ने राजस्वको क्रमश: ३७.५ र ५० प्रतिशत हिस्सा कम्पनी सरकारलाई बर्सेनि बुझाउने प्रस्ताव राखे । त्यति धेरै राजस्व बुझाउनु असम्भव थियो । त्यसैले उनको प्रस्तावलाई अंग्रेजहरूले गम्भीरता–पूर्वक लिएनन् ।
उनलाई मोहरा बनाएर नेपालसँग वाणिज्य सन्धि गर्न कम्पनी सरकार सफल भयो । रणबहादुर आफूहरूको हातबाट फुत्किएलान् र उनलाई देखाएर काठमाडौंलाई अझ कज्याउने योजना चौपट होला भनेर ‘सापटी लिएको पैसा नतिरी कतै जान नदिने’ भन्दै उनलाई अघोषित बन्दी बनाइयो ।
विदेशीसँग व्यवहार गर्दा मर्यादाको अधिक ख्याल गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञमध्येमा पर्छन्, जंगबहादुर राणा । भारतीय रजौटाका दिवानसरह नभई सार्वभौमसत्तासम्पन्न राजाका दूतको हैसियतले आफूलाई १९ तोपको सलामी, बेलायती महारानीसँग शिष्टाचार भेट र प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक छलफलको अवसर दिन बेलायती प्रशासकहरूलाई राजी गराएपछि मात्रै उनी युरोपतिर लागेका थिए । बेलायत छिर्नै लाग्दा जंगबहादुरको मर्यादाको परीक्षण भयो । उनको टोलीको मालसामान भन्सारका कर्मचारीले जाँच्न खोजे, जुन पूर्वसहमतिको विपरीत थियो । म्लेच्छले छोएको सामान बिटुलो हुन्छ भन्ने विश्वास त्यतिबेला नेपालमा थियो । उसो त त्यो जंगबहादुरका लागि मर्यादाको कसी पनि थियो । आफ्नो टोलीका झिटीगुन्टा कसैले छोएमा त्यहीँबाट फ्रान्सतिर लाग्ने चेतावनी उनले दिए । अन्त्यमा झिटीगुन्टा नजाँच्ने निर्णयमा भन्सार कार्यालय पुग्यो ।
लन्डनमा आयोजित औपचारिक समारोहमा जंगबहादुरले स्पेनका राजदूतसँग एउटै लहरमा बस्ने चाँजोपाँजो मिलाएर देशको हैसियत बढाए । उनको सम्मानमा बेलायतमा राजकीय भोजहरू आयोजना गरिए । बेलायती राजकुमारको न्वारान समारोहमा महारानीले उनलाई आफ्नै छेउमा राखिन् । उनको इच्छाबमोजिम बेलायत र फ्रान्स दुवै देशले सैन्य परेड आयोजना गरिदिए ।
जंगबहादुरको प्रस्तुतिको बान्कीकै कारण बेलायती प्रशासकहरू उनीसामु मर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुने गर्थे । उत्तर भारतमा भड्किएको सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दमन गर्न जंगबहादुरले सहयोग गर्नुअगावै अंग्रेज अधिकारीहरू उनीसँग मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुन थालिसकेका थिए । उनको पालामा नेपाल–अंग्रेज सम्बन्धलाई स्थिर तुल्याउन अंग्रेजहरू पनि तत्पर भए । यस्तो हुनुमा जंगबहादुरको व्यक्तित्वले पनि भूमिका खेलेको छ । यदि उनको प्रस्तुति रणबहादुरकै जस्तो फितलो हुन्थ्यो त नेपाललाई बेलायतले त्यतिबेला पनि गम्भीरतापूर्वक लिने थिएन ।
व्यक्तित्वमा मर्यादाको स्रोत केलाउँदै गर्दा राजा त्रिभुवन र उनका छोरा महेन्द्रबारे उल्लेख गर्नु पनि प्रासंगिक हुन्छ । त्रिभुवनलाई भारतीय नेताहरू गम्भीरतापूर्वक लिँदैन थिए किनकि उनको स्वभाव हलुको थियो । राजोचित मर्यादा बिर्सिएर उनी बिनाकाम कलकत्तातिर टहल्न गइरहने गर्थे । महेन्द्रले रत्नसँग बिहे गर्ने निश्चय गरेपछि ‘मैले हुँदैन भन्दाभन्दै त्यसले त्यो जुद्धेकी नातिनीसँग बिहे गर्ने ?’ भनी क्रुद्ध भएर कलकत्तातिर गई त्रिभुवनले छोरोको बिहे बहिष्कार गरेका थिए । बेला न कुबेला त्रिभुवन कलकत्ता पुग्न थालेपछि असहज महसुस गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई ‘राजा भारत आउनुहुन्छ र यहाँका झिनामसिना व्यापारी तथा महिलाहरूसँग नसुहाउने गरी हिमचिम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई कृपया सम्झाउनुहोला’ भनी चिठी नै लेखेका थिए । बीपी कोइरालासँग पनि नेहरूले एकपटक त्रिभुवनका यस्तो हर्कतबारे गुनासो गरेका थिए ।
राजा नै त्यस्तो स्वभावका भएपछि भारतले नेपालसँग मर्यादित व्यवहार गर्न आवश्यक ठानेन । फलस्वरूप त्रिभुवनकै पालामा नेपालमा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट स्थापना गरिए । राजदरबारमा भारत सरकारका कर्मचारी गोविन्द नारायण नियुक्त भए । भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हा नेपालका प्रधानमन्त्रीभन्दा बढ्ता प्रभावशाली बने । त्रिभुवनपछि राजा बनेका महेन्द्रको स्वभाव बाबुको भन्दा ठीक विपरित थियो । मर्यादालाई लिएर उनी सचेत थिए । त्यसैले बाबुको पालामा गृह, विदेश तथा प्रतिरक्षा मामिलामा भारतले लगाएको गलपासोबाट महेन्द्रले नेपाललाई धेरै हदसम्म मुक्त गरे । त्रिभुवन र महेन्द्र दुवैको पद एउटै थियो । तर, त्यसलाई ओगट्ने पात्रको व्यक्तित्व र आचरणले पदको गरिमा भिन्न बन्यो ।
राष्ट्रिय मर्यादाको स्रोत राष्ट्रको क्षमता र उसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रको व्यक्तित्व दुवै हो । तर, राष्ट्रिय सामथ्र्यको सीमा नाघेर नेहरू, टिटोलगायतले आफ्नो देशको मर्यादा उकासेका अनेकन उदाहरण हाम्रासामु छन् । सैन्य र आर्थिक दृष्टिले कमजोर राष्ट्रको सूचीमा पर्ने नेपालले यसबारे बढी हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । ‘राष्ट्रहरू सानो–ठूलो हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय मर्यादा सबैको समान हुन्छ’ भन्ने आदर्शवादी उक्ति कमजोर भएकाले हामीलाई कर्णप्रिय त लाग्ला, तर राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रको प्रस्तुति ओजपूर्ण हुन सकेन भने यस्तो आदर्शले मात्र देशको मर्यादा उकास्न सक्दैन ।
प्रकाशित : असार २७, २०७७ १२:१५
लिपुलेक प्रकरणमा नेपालबारे टिप्पणी गर्ने भारतीयहरुको पेटबोली ‘नेपालले हामीलाई भन्दा बढ्ता चीनलाई भाउ दियो’ भन्ने छ । भारतले नेपाललाई चीनले भन्दा बढ्ता आर्थिक सहयोग गर्दै आएको भए पनि नेपालले चीनको मानमनितो बढी गरेको भन्दै भारतीयहरुले एकसाथ खिन्नता र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्  ।
जेष्ठ २४, २०७७ सुजित मैनाली
त्यसैले आफ्नो देशको मानचित्र हेर्दा भारतीयहरूले अंग्रेजहरूको पदचाप पछ्याउँदै पश्चिमोत्तरमा अफगानिस्तानसम्म र उत्तरमा अग्ला हिमशृङ्खलासम्म आँखा डुलाउने गरेका छन् । अंग्रेजहरूबाट यस्तो बुझाइ ग्रहण गर्दै गर्दा सुरक्षा जोखिमका बीच कतिपय आर्थिक हितका प्रसंगलाई नियाल्ने सवालमा चाहिँ भारतले बेग्लै बाटो समात्ने गरेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हेर्ने सवालमा पनि यस्तै अवस्था विद्यमान छ ।
लिपुलेक प्रकरणपछि चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई लिएर भारतमा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नेपाल–चीन सम्बन्ध नियाल्ने सवालमा औपनिवेशिक र अहिलेका भारतीय प्रशासकहरूको बुझाइमा विद्यमान निरन्तरता र क्रमभंगको अवस्थाबारे विवेचना गर्नु सामयिक हुन्छ । यसै प्रयोजनका लागि यहाँ अंग्रेज प्रशासक ब्रायन हज्सन (सन् १८००–१८९४) को नेपाल–चीन सम्बन्धसम्बन्धी बुझाइबारे पृष्ठभूमिसहित चर्चा गरिएको छ ।
इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्ध (सन् १८१४–१६) मा पराजित भएपछि काठमाडौंमा अंग्रेजहरूको रेसिडेन्सी स्थापना गर्न दिन नेपाल सहमत भयो । कम्पनी सरकारले एडवार्ड गार्डनरलाई पहिलो आवासीय दूत बनाएर काठमाडौं पठायो । गार्डनरअघि जोन बोयलुलाई कार्यबाहक आवासीय दूत बनाएर पठाइएको थियो ।
काठमाडौं आउनुअघि गार्डनर कम्पनी सरकारका कुमाउ कमिसनर थिए । नेपाल–अंग्रेज युद्धताका कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरल ह्यास्टिंग्सका आधिकारिक प्रतिनिधिसमेत थिए । कुमाउमा छँदा उनले नेपाल–अंग्रेज युद्ध टुंग्याउने गरी दुई देशबीच हुने सन्धिको मस्यौदाबारे नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा पाएका थिए । त्यतिबेला ब्रायन हज्सन (सन् १८००–१८९४) कम्पनी सरकारको निजामती सेवामा भर्खरै प्रवेश गरेका थिए । उनलाई कुमाउको सहायक कमिसनर बनाएर गार्डनरलाई सघाउन भनी खटाइएको थियो । कुमाउमा रहँदा नेपाली भारदारहरूसँगको बाक्लो उठबसका कारण गार्डनर नेपालबारे जानकार बने । उनको त्यस योग्यताबाट लाभ लिन भनेर कम्पनी सरकारले उनलाई आवासीय दूत बनाएर काठमाडौं पठायो । त्यसलगत्तै गार्डनरलाई सघाउन भनेर हज्सनलाई पनि सन् १८२० मा सहायक रेसिडेन्टको जिम्मेवारीसहित काठमाडौं पठाइयो ।
हज्सन फारसी भाषामा पोख्त थिए । त्यतिबेला नेपालसहित वरिपरिका सबै राज्यले एकअर्कासँग पत्राचार गर्न फारसी भाषाको सहायता लिने गर्थे । हज्सनलाई काठमाडौं रेसिडेन्सीबाट कलकत्तास्थित फारसी विभागमा सरुवा गरियो । त्यहाँ उनले करिब दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि काठमाडौं रेसिडेन्सीको पत्राचारसम्बन्धी फाँटमा सक्रिय हुनेगरी फर्किए । केही समयपछि सहायक रेसिडेन्ट पदमा पुनः नियुक्त भए । गार्डनरले सन् १८२९ मा राजीनामा गरेपछि करिब दुई वर्ष कार्यबाहक रेसिडेन्ट भएर हज्सनले काम गरे । गार्डनरको ठाउँ लिन हर्वर्ट म्याडक आएपछि हज्सनले उनी मातहत रहेर पनि काम गरे । म्याडकको फिर्तीपछि सन् १८३३ मा अन्ततः हज्सनलाई रेसिडेन्ट नियुक्त गरियो । त्यसउप्रान्त सन् १८४३ सम्म रेसिडेन्टकै हैसियतले उनी काठमाडौंमा रहे । काठमाडौंमा करिब २१ वर्ष रहेर उनले नेपालमा सबैभन्दा लामो अवधि बस्ने विदेशी कूटनीतिज्ञको कीर्तिमान रचे ।
नेपाल-अंग्रेज युद्धअघि चीनसँग पनि नेपालको युद्ध भएको थियो । चीनबाट पनि नेपाल पराजित भएको थियो । यद्यपि अंग्रेजसँगको पराजय नेपाललाई बढी अपमानजनक भयो । नेपालले एकतिहाइ भूमि गुमायो । थप विस्तारित हुने नेपालको आकांक्षामा सदाका लागि बिराम लाग्यो ।
लामो बसाइका कारण मात्र हज्सन नेपाल–अंग्रेज सम्बन्धको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण बनेका होइनन् । उनी काठमाडौंमा छँदा नेपालमा थुप्रै राजनीतिक उथलपुथल भए । अंग्रेजसँगको युद्धमा बेहोरेको पराजयका कारण काठमाडौं दरबारमा सिर्जित विषाददेखि भीमसेन थापाको पतनले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताका शृङ्खलासम्मका साक्षी भए, उनी । कतिपय घटनामा उनी साक्षीका रूपमा मात्र सीमित भएनन्, कम्पनी सरकारले चाहेको दिशामा नेपालीे राजनीतिलाई मोड्ने कर्ताका रूपमा समेत क्रियाशील भए । काठमाडौंबाट उनी फर्किएको झन्डै तीन वर्षमै नेपालमा कोतपर्व मच्चियो । हज्सनको फिर्तीपछि इतिहासको त्यस सङ्गीन अध्यायको पटाक्षेप भए तापनि त्यसको आधार उनी काठमाडौंमा छँदै निर्मित भएको थियो । त्यस महत्त्वपूर्ण अवधिमा दक्षिणी छिमेकीका प्रतिनिधिको हैसियतले हज्सनले काठमाडौंमा बसेर नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनप्रति यहाँका राज्य सञ्चालकहरूको धारणालाई कसरी नियालेका थिए भन्ने विषय रोचक छ । कूटनीतिमा अभिरुचि राख्नेहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण पनि छ ।
नेपाल–अंग्रेज युद्धअघि चीनसँग पनि नेपालको युद्ध भएको थियो । चीनबाट पनि नेपाल पराजित भएको थियो । यद्यपि अंग्रेजसँगको पराजय नेपाललाई बढी अपमानजनक भयो । नेपालले एकतिहाइ भूमि गुमायो । काठमाडौंमा अंग्रेज प्रतिनिधिलाई रहन नदिने दशकौंदेखिको अडानबाट नेपाली नेतृत्व लत्रियो । थप विस्तारित हुने नेपालको आकांक्षामा सदाका लागि विराम लाग्यो । अंग्रेजसँगको पौँठेजोरीबाट बढ्ता क्षति बेहोर्नुपरेको भए पनि नेपाली राज्य सञ्चालकहरूको आँखामा अंग्रेजभन्दा चीनको हैसियत माथि थियो ।
यस्तो हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यतिन्जेल बेलायत, जापानलगायत मुलुकसँग चीनको युद्ध नभएकाले उसको सैन्य क्षमताको परीक्षण भएकै थिएन । चीन स्वयंले पनि त्यतिबेला आफूलाई संसारकै सभ्य र शक्तिशाली मुलुक ठान्थ्यो । चिनियाँहरू आफ्ना सम्राटलाई सम्पूर्ण भूलोकको अधिपति ठान्थे र उनलाई देवसम्राट (सेलेस्टियल एम्पेरर) भनि सम्बोधन गर्थे । बेलायतलाई चिनियाँहरू फगत एक टुक्रो राज्य ठान्थे र त्यहाँका राजालाई त्यस क्षेत्रका मुखियासरह व्यवहार गर्न खोज्थे । आफू सबैभन्दा श्रेष्ठ हौं भन्ने अहम्कै कारण चिनियाँहरूले सन् १७९२ मा बेलायती राजा जर्ज तृतीयको सन्देश लिएर बेइजिङ पुगेका इस्ट इन्डिया कम्पनीका अधिकारी जर्ज म्याकार्टनीलाई चिनियाँ सम्राटको अगाडि दुवै घुँडा टेकी टाउकाले तीनपटक भुइँ छोएर आदर दर्साउन दबाब दिएका थिए ।
त्यतिबेला चीनले ल्हासामा अम्बान (प्रतिनिधि) राख्ने गर्थ्यो । ल्हासामा नेपालले मल्लकालदेखि नै गहिरो सरोकार राख्दै आएकाले चिनियाँ अम्बानको रवाफसँग नेपाली शासकहरू परिचित थिए । नेपाल–चीन युद्धपछि हरेक पाँच वर्षमा नेपालका राजाले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत चिनियाँ सम्राटका नाममा सौगात पठाउने सहमति दुई देशबीच भएको थियो । त्यस सहमतिमार्फत बेइजिङ पुगेर त्यहाँको शानशौकत प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त भयो । चिनियाँ वैभव र चिनियाँ सम्राटको शानशौकतबारे जानकार नेपाली राज्यसञ्चालकहरूको नजरमा चीन सबैभन्दा शक्तिशाली देश दरिनु अनौठो थिएन ।
नेपालले चिनियाँ सामर्थ्यबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनचाहिँ कहिल्यै पाएन । नेपाल–अंग्रेज युद्धमा चीनले हस्तक्षेप गरेन । तिब्बतमाथि चढाइ गर्ने उद्देश्यले अंग्रेजले नेपालमा हमला गरेको भन्दै नेपालले चिनियाँ सम्राटलाई चिठी लेखेर सहयोग मागेको थियो । नेपाललाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरे पनि चीनले ‘नेपालले भनेको कुरा साँचो हो/होइन, स्पष्ट पार’ भनी कम्पनी सरकारलाई केरकार गरेको थियो । नेपाल–अंग्रेज युद्ध समाप्त भएपछि आफ्ना प्रतिनिधिलाई ल्हासा पठाएर चिनियाँ सम्राटले युद्धपश्चात्को अवस्थाबारे बुझ्न लगाएका थिए । युद्धपछि काठमाडौंमा रहनेगरी आएका अंग्रेज आवासीय प्रतिनिधिलाई फिर्ता पठाउन नेपालले सहयोग माग्दा चीनले कम्पनी सरकारलाई चिठी लेखेर आवासीय दूत फिर्ता लैजान भनेको थियो । जवाफमा कम्पनी सरकारले नेपालको आन्तरिक अथवा बाह्य मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेगरी काठमाडौंमा रेसिडेन्सी स्थापना नगरिएको स्पष्ट पार्नुपरेको थियो । त्यसउप्रान्त चीनले यस विषयबारे अंग्रेजसँग कुराकानी गरेन । नेपालप्रति चीनको यस्तो खालको नरम अभिरुचिका कारण काठमाडौंसँग व्यवहार गर्दा संयमताको हद नाघ्न अंग्रेजहरूले संकोच मान्नुपरेको थियो ।
आपत्मा परेको बेला सहयोग नगर्ने चीनप्रति नेपालको व्यवहारचाहिँ सधैं हार्दिक रहिरह्यो । अंग्रेजसँगको युद्धमा चीनले पराजय बेहोरेपछि मात्रै नेपाली शासकहरूको नजरमा चीनको हैसियत कम हुँदै गयो । चीनप्रति नेपालको आदरभावलाई काठमाडौंमा बसेर हज्सनले राम्रोसँग नियालेका थिए । २२ अक्टोबर १८३३ मा उनले बहिनी फ्यानीलाई लेखेको एउटा चिठीमा चीनप्रतिको नेपालको मनोभावबारे उल्लेख गरेका छन् । सो पत्र हज्सनका पहिला जीवनीकार विलियम विल्सन हन्टरले ‘लाइफ अफ ब्रायन हाउटन हज्सन, ब्रिटिस रेसिडेन्ट एट द कोर्ट अफ नेपाल’ शीर्षकको किताबमा छापेका छन् ।
पत्रमा हज्सनले भनेका छन्, ‘गत फेब्रुअरीयता म यो (काठमाडौं) दरबारको आवासीय मन्त्री (दूत) बनेको छु । भारतीय उपमहाद्वीपमा स्वतन्त्र रहेको एक मात्र दरबार यही हो । ३३ वर्षको उमेरमा यस्तो सम्मान पाउनु मेरा लागि खुसीको कुरो हो । यी बर्बर (नेपाली) हरूले आफ्नो भलाइबारे राम्रोसँग बुझ्न नसकेकाले मेरो बसाई त्यति सुखद हुन सकेको छैन । यिनीहरू अभद्र छन् र हामीसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छन् । यिनीहरू चिनियाँप्रतिको आफ्नो शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार र विदेशनीति देखाएर आफ्नो क्षमता र दुस्साहसले भ्याएसम्म हामीविरुद्ध खेल्न खोज्छन् ।’ पत्रमा हज्सनले चीनप्रतिको नेपाली रुझानबारे थप प्रकाश पारेका छन्, ‘चिनियाँ सम्राट यिनीहरूका लागि परमपुज्य छन् । अहिले मैले यो पत्र लेखिरहँदा चीनबाट भर्खरै नेपाल आइपुगेको (चिनियाँ सम्राटले पठाएको) पत्र ग्रहण गर्न (नेपालका) राजा दरबारिया रवाफ देखाउँदै रेसिडेन्सीछेउ भएर स्वयं तीन माइल पर गए ।
राजाको साथमा घोडसवार ५० जना भारदार र आठवटा हात्तीमा सवार राजपरिवारका सदस्य तथा तिनका सल्लाहकार छन् । उनीहरूका अगाडि र पछाडि तीन हजार सैनिक छन्... सम्राटले पठाएको पत्र ठोक्रोजस्तो एउटा खामभित्र बन्द हुन्छ, जुन किम्ती कपडाले मोरिएको हुन्छ । (बेइजिङ पुगेर फर्किएका) भारदारको घाँटीमा त्यो पत्र झुन्डिएको हुन्छ । त्यहाँ पुगेर पत्र ग्रहण गर्न भनी राजा हात्तीबाट ओर्लिन्छन् । (त्यतिबेला चिनियाँ सम्राटको) सम्मानमा तोप पड्काइन्छ । त्यसपछि पत्र पहिलेकै भारदारलाई पुनः दिइन्छ । टोलीको अगाडिपट्टि एउटा खाली हात्ती राखिएको हुन्छ । ती भारदार त्यसैमा चढ्छन् । अनि टोली राजधानीतिर फर्किन्छ ।’
हज्सनको यस पत्रले चीनप्रति नेपाल त्यतिबेला अत्यन्तै हार्दिक रहेको र यो कुरा हाम्रो दक्षिणी छिमेकलाई बिझेको देखाउँछ । भोलिका दिनमा चीनको साथ लिएर सुगौली सन्धि भंग गर्न अथवा दक्षिणतिरबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्ने आसमा नेपालले उच्च सम्मान दर्साएर चीनलाई रिझाउने नीति लिएको थियो । अंग्रेजलाई सन्तुलनमा राख्न पनि चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाउनुपर्ने बाध्यता नेपालसँग थियो ।
सन् १८३९ मा चीन र बेलायतबीच युद्ध भयो, जसलाई इतिहासमा पहिलो अफिम युद्ध भनिन्छ । युद्धलाई नेपालले सुगौली सन्धि भंग गर्ने प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोजेको थियो । तर, सकेन । चीनसँगको युद्धमा बेलायत पराजित हुन्छ भन्ने अनुमान नेपालले गरेको थियो । त्यही मौकामा चीनको साथ लिएर कम्पनी सरकारविरुद्ध युद्धमा उत्रिने मनसाय नेपालले बनाएको थियो । यसका लागि चीनसँग संवादसमेत बढाएको थियो । यद्यपि नेपालको त्यस्तो अग्रसरता सुविचारित नभई हठात थियो भन्ने कुरा तत्कालीन विवरणहरू नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ ।
त्यतिबेला हज्सन नेपालमै थिए । कम्पनी सरकारका गर्भनर जनरलका नाममा काठमाडौंबाट पठाइएका पत्र र गुप्तचरी प्रतिवेदनमा हज्सनले चीन–बेलायत युद्धले नेपाली राजदरबारमा उद्वेलन सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले १४ फेब्रुअरी १८४० मा पठाएको एउटा पत्रमा युद्ध भएको थाहा पाउनासाथ ल्हासास्थित चिनियाँ अम्बानलाई नेपालले पत्र पठाएको र त्यसलगत्तै अर्को पत्र पठाएर संवाद सघन बनाउन खोजेको उल्लेख छ । पत्रमा हज्सनले चीनप्रतिको नेपाली दृष्टिकोणबारे पनि संक्षेपमा उल्लेख गरेका छन्, जसको मर्म करिब साढे छ वर्षअघि बहिनी फ्यानीलाई लेखेको पत्रको मर्मसँग हुबहु छ । पत्रमा हज्सनले उद्वेलन र हतासालाई नेपाली दरबारको स्थायी चरित्र भनेका छन् । चीन–बेलायत युद्धको खबरले नेपाली शासकहरूको मानसिक उद्वेलनलाई अझ सघन तुल्याएको बताएका छन् । ‘चीनलाई नेपालीहरूले उहिल्यैदेखि संसारकै सबैभन्दा बढ्ता सुझबुझ भएको सर्वशक्तिमान सरकार (देश) मान्दै आएका छन्,’ हज्सनले लेखेका छन् ।
हज्सनले ‘उद्वेलन र हतासा’ लाई नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूको स्थायी चरित्र बताएर काठमाडौंको नसनाडी छाम्ने सवालमा आफ्नो प्रौणता सिद्ध गरेका छन् । त्यस्तो खालको मानसिक छटपटाहटबाट नेपाली राजनीतिका शीर्ष खेलाडीहरू आजका मितिसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस्तो मनोभावले पद्धति र स्थिरताको बाटो समाउनबाट नेपाललाई वञ्चित राखिरहेको छ । चीनसँग नेपालले गर्ने व्यवहारप्रति असन्तुष्ट रहने दक्षिणी छिमेकीको मनोभावमा पनि यतिका वर्ष बित्दासमेत बदलाव आएको छैन । अतः हज्सनबारे चर्चा गर्नु आजका मितिमा पनि सान्दर्भिक छ ।
गत वर्ष अगस्ट र सेप्टेम्बरमा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीले केही साताको फरक पारेर नेपाल भ्रमण गरे । संयोग हो अथवा नेपाल सरकारको पूर्वतयारी, चीन र भारतका विदेशमन्त्रीलाई नेपालमा गरिएको व्यवहार फरक थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई विमानस्थल पुगेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले स्वागत गरे । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको स्वागतमा चाहिँ परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी पुगे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुवै विदेशमन्त्रीले भेटघाट गर्दा तय गरिएको मेच व्यवस्थापन पनि फरक थियो । वाङलाई भनेर प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो कुर्सी छुट्याइएको थियो । मेचको एउटै लहरमा दुवै कुर्सी राखेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीप्रति सम्मान दर्साइएको थियो । भारतीय विदेशमन्त्रीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सीबाट अलिक पर्तिर सोफामा राखिएको थियो । वाङसँग ओलीको भेटघाट हुँदा मेचमा दुवै देशका झन्डा थिए । जयशंकरसँगको भेटमा झन्डा थिएनन् ।
त्यस घटनाले भारतलाई निश्चय पनि खिन्न तुल्यायो । तर, आफ्नो खिन्नता उसले सार्वजनिक गरेन । २०७२ मा नेपालले संविधान जारी गर्न लाग्दा त्यसलाई जसरी पनि रोक्ने बाहुबली नीति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अख्तियार गरेका थिए । त्यस नीतिको कार्यान्वयन गराउन उनको विशेष दूत बनेर जयशंकर काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला उनी भारतका विदेशसचिव थिए । काठमाडौंमा रहँदा नेपाली नेताहरूसँग उनी असंयमित र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको टीकाटिप्पणी पत्रपत्रिकामा छापिएका थिए । विदेशमन्त्री बनेर आएका जयशंकरका लागि गरिएको फरक मेच व्यवस्थापन सम्भवतः त्यही घटनाप्रति नेपाली नेतृत्वले दर्साएको असन्तुष्टि थियो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीसरह आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई नेपालले व्यवहार नगरेकोबारे भारतीय मिडियामा पनि टीकाटिप्पणी भएनन् । यद्यपि भारतको मनोभाव बुझेका नेपालीहरूबाट त्यस्तो असन्तुष्टि बाहिरियो । जयशंकर काठमाडौंबाट फर्किएलगत्तै उनीप्रति गरिएको ‘भेदभाव’ बारे नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले आपत्ति जनाए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको स्वागत र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा गरिएका कुर्सी र झन्डाको व्यवस्थापन समान नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘एउटा परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्दा राजा–रैतीजस्तो गरी भेटेको छ, अर्कोलाई बराबरीको अवस्थामा भेटेको छ... झन्डा राखेको छ... दुवै छिमेकीलाई समान व्यवहार गरेनौं भने त्यसको सिकार पनि हामी कहीँ न कहीँ हुन्छौं ।’
अहिले जारी लिपुलेक प्रकरणमा नेपालबारे टिप्पणी गर्ने भारतीयहरूको पेटबोली पनि ‘नेपालले हामीलाई भन्दा बढ्ता चीनलाई भाउ दियो’ भन्ने नै छ । भूगोल, अर्थतन्त्र र संस्कृतिले नेपाललाई भारततिर ढल्काएको भए पनि र भारतले नेपाललाई चीनले भन्दा बढ्ता आर्थिक सहयोग गर्दै आएको भए पनि नेपालले चीनको मानमनितो बढी गरेको भन्दै भारतीयहरूले एकसाथ खिन्नता र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
भारतसँग नेपालको प्रशस्तै व्यवहार हुने भएकाले उसको सामर्थ्य र नियतबारे नेपालीहरू सामान्यतः जानकार छन् । तर, चीन नेपालीहरूका लागि रहस्यको एउटा पुञ्ज हो । चीन र नेपालबीचको अन्तरक्रिया अत्यन्तै सीमित भएकाले नेपालीले चीनलाई राम्रोसँग बुझ्न पाएका छैनन् । चीनलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्ने शक्तिशाली देशका अभिव्यक्तिमार्फत नेपालीले चीनबारे बुझ्नुपरिरहेको छ । यसबाट चीन शक्तिशाली देश हो भन्ने छाप नेपालीहरूको मनमा परेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा ठूलो विवाद नरहेकाले चीनको बढ्दो सामर्थ्यबाट नेपालले डराउनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । दक्षिणी छिमेकीसँगको सीमा विवाद र यहाँको आन्तरिक मामिलामा उसले गर्ने हस्तक्षेपले चाहिँ नेपालसँगको उसको सम्बन्धलाई विवादित बनाएको छ । त्यसैले चिनियाँ सामर्थ्यलाई नेपालले भारतको अनधिकृत दबाब झेल्ने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने चाहना राख्दै आएको छ ।
सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि पूर्ण सार्वभौमसत्ता लागू गरेयता दक्षिण एसियाको शक्तिसमीकरणमा उल्लेख्य फेरबदल आएको छ । विगत चार दशकयता चिनियाँ अर्थतन्त्र निरन्तर सबल बन्दै जाँदा त्यस्तो शक्तिसमीकरण चीनका पक्षमा सघन बन्दै गएको छ । चिनियाँ सामर्थ्य अझ फैलिँदो अवस्थामा रहेकाले भारतले चीनलाई दक्षिण एसियाको वैधानिक खेलाडीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था निकट भविष्यमै आउने सम्भावना प्रबल छ । चीनभन्दा शक्तिशाली अंग्रेजहरूले त चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई संशयपूर्वक हेर्ने गर्थे भने भारतभन्दा चीन अझ शक्तिशाली बन्दै गएको यो बेला भारतीयहरूमा त्यस्तो मनोभाव देखिनु अस्वाभाविक होइन । आफू स्वयंलाई बदलेर भारतलाई त्यस्तो मनोभावबाट त्राण दिलाउन नेपाललाई सम्भव छैन । चीनप्रतिको संशय भारतको त्यस्तो जटिल समस्या हो, जसको ओखती नेपालले उपलब्ध गराउन सक्दैन । तर, नेपालमा चीनलाई लिएर चिन्तत नहुनेगरी चाहिँ भारतलाई आश्वस्त तुल्याउन सकिन्छ । नेपाललाई स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने हो भने भारतलाई विश्वासमा लिने खुबी नेपाली नेतृत्वले देखाउनैपर्छ ।
भारतले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई शंकाको दृष्टिले मात्रै हेर्‍यो भने स्वयं उसलाई पनि फाइदा हुँदैन । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने त्रिदेशीय साझेदारीको लाभ उठाउनबाट भारत चुक्नेछ । हज्सनको प्रसंगबाट पनि भारतले त्यस्तो आशंकादेखि माथि उठ्नेगरी प्रेरणा लिन सक्छ । चीनप्रतिको नेपाली रुझानप्रति हार्दिक नरहे पनि हज्सन नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने योजनाका पक्षधर थिए । औपनिवेशिक मुलुकका दूतको हैसियतले नेपाललाई कज्याएर राख्न कटिबद्ध हुँदै गर्दा उनले नेपालको सरोकारलाई पनि बुझेका थिए । एकतिहाई भूमि कम्पनी सरकारलाई बुझाएको र तीनतिरबाट कम्पनी सरकारबाट घेरिएको नेपाललाई कृषि र व्यापारमा रचनात्मक दिशा अवलम्बन गर्न सघाउन सके मात्रै उसलाई ‘मौन र शान्त स्वभाव भएको छिमेकी तथा साझेदार’ बनाउन सकिन्छ भन्ने हज्सनको विश्वास थियो ।
सन् १८३० मा हज्सनले कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरलका लागि तयार गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भुटान अथवा कुमाउको सट्टा नेपाललाई अन्तरहिमालय व्यापारको नाका बनाउन सुझाएका थिए । सन् १८३१ मा तयार गरेको अर्को एउटा प्रतिवेदनमा उनले मध्यएसियाको व्यापारमा जम्न दुईवटा व्यापारिक नाका बढी महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । तीमध्ये पहिलो नाका रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गदेखि बेइजिङसम्म तन्किएको थियो । दोस्रो नाका बेइजिङबाट नेपाल हुँदै कलकत्तासम्म फैलिएको थियो । यी दुईमध्ये दूरी र भन्सार शुल्कका हिसाबले नेपाल हुँदै गुज्रिने बेइजिङ–कलकत्ता नाका बढी सहज र मुनाफामूलक रहेको निष्कर्ष हज्सनले निकालेका थिए । नेपाललाई भारत र भित्री एसियाको सामान खरिद–बिक्री हुने व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गभर्नर जनरलसमक्ष पेस गरेका थिए ।
हज्सनको त्यस सिफारिसबाट भारतले सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् । नेपालमा चीनको छायासँग लड्नमै आफ्नो ऊर्जा खर्च गरेर भारतले फाइदा उठाउन सक्दैन । चीनबाट सिर्जना हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमप्रति संवेदनशील रहँदै गर्दा भारतले सुरक्षाका दृष्टिले मात्र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नियाल्नु हुँदैन । हज्सनले पनि त्यस्तो गरेका थिएनन् । सुरक्षा प्रसंगलाई एकोहोरो केन्द्रमा राखेमा नेपालसँग आपसी हित अभिवृद्धि गर्नबाट भारत वञ्चित भइरहन्छ । यसले नेपालमार्फत हासिल हुने अधिकतम आर्थिक लाभ उठाउनबाट उसलाई वञ्चित राख्छ ।
भारतसँगको निकटतम सम्बन्धबाट नेपालको कल्याण हुन्छ भनी नेपालीलाई महसुस गराउने मुख्य जिम्मा भारतकै हो । आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि नेपालले चीन र भारतबीच पुल बन्ने अभिलासा राखेको छ । यसप्रति चीन सकारात्मक छ । भारतले पनि यसमा सम्मति जनाएर लाभ लिन सक्छ । भारतसँग औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी हुँदा नेपाली नेतृत्वले नेपालको यस्तो हितले भारतको अहित गर्दैन भनी भारतीयहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यस प्रयोजनमा नेपाल–चीन सम्बन्धप्रतिको हज्सन दृष्टि उपयोगी हुन सक्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ ११:४७